သဒ္ဓါလှိုင်း: April 2010
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့် မရကြပါဘူး။
တချို့ကတော့ ကြွေးဟောင်း ဆပ်ခွင့်ရပေမဲ့ မဆပ်ကြတဲ့သူတွေ..၊ တချို့ကတော့ ဆပ်ခွင့် မရကြသူတွေ..၊ တချို့ကတော့ မဆပ်နိုင်ကြသူတွေ..၊ တချို့ကတော့ ကြွေးဟောင်းကိုပဲ စားသုံးနေသူတွေ..
ကြွေးဟောင်းဆိုတာ မိဘ အပေါ်တင်နေတဲ့ အကြွေးလား.. မိမိကို ကျေးဇူးပြုဖူးသူတွေ အပေါ်တင်နေတဲ့ အကြွေးလား…….
အဲလို ..........`လား´ ပေါင်းများစွာ စဉ်းစားမိပြန်တယ်...။
တချို့က ဆပ်ခွင့်ရပေမဲ့လည်း မိမိရဲ့ အသိဥာဏ် မမြင်မှု အတွက်၊ မိမိရဲ့ လောဘ အတွက်၊ မိမိရဲ့ မေ့လျော့မှု အတွက်၊ မိမိရဲ့ မိုက်မဲမှု အတွက်၊ သူတပါး လွှမ်းမိုးမှု အောက်မှာ နေရတဲ့ အတွက်၊ မိမိ ကိုယ်တိုင်က မဆပ်နိုင်ပါဘူး…. မလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ ထင်မြင်နေတဲ့ အတွက်၊ လူ့ဘောင် လောကကြီးရဲ့ များမြောင်လှတဲ့ ကိစ္စ အထွေထွေနဲ့ ရင်ဆိုင် နေရတဲ့ အတွက်၊ ကျပ်တည်းလှတဲ့ ဘ၀ပေး အခြေအနေ တခုအောက်မှာ နေရတဲ့ အတွက်၊ အဝေးရောက် နေကြတဲ့ အတွက်၊ နီးနေပေမဲ့လည်း မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်နေတဲ့ အတွက်၊ …………… အတွက်တွေ ကြောင့် ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့် မရကြပါဘူး။
တချို့ကတော့ ဆပ်ခွင့် ကြုံပေမဲ့၊ ဆပ်ခွင့် ရပေမဲ့ မဆပ်ကြသူတွေပေါ့.....
တချို့ကတော့ ဘယ်လိုမှ ဆပ်ခွင့် မရနိုင်ကြသူတွေပေါ့.....
တချို့အနေနဲ့တော့ ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့် ဆုံးရှုံး နေကြရတာပါ…။ အဲလို ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ သူတွေ အနေနဲ့လည်း တနည်းနည်းနဲ့ ဆပ်ခွင့် ရဖို့ ကြိုးစား ရမှာပါ.။
ကြွေးဟောင်း ဆပ်ခွင့် မရကြသူတွေနဲ့ ကြွေးဟောင်း ဆပ်ခွင့် ရပေမဲ့ မေ့လျော့နေတဲ့ သူတွေ……..အမှောင်လမ်းမှာ လျှောက်လှမ်း နေကြသူတွေကို ကြည့်ပြီးတော့လည်း ဆပ်ခွင့်ရစေဖို့ မျှော်လင့် တောင့်တမိတယ်။
ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့် ရဖို့ ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ သူတွေ ရှိသလို ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့် ရှိပြီး ကြွေးဟောင်း ဆပ်နေသူတွေရဲ့ ပီတိ ဖြစ်စရာ ခြေလှမ်းတွေကလည်း အတုယူစရာလို့ ထင်မြင်မိတယ်။
ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့် ကြုံတယ်ဆိုကတည်းက ထူးခြားလှတဲ့ ကုသိုလ် အဖြစ်ကို ရောက်နေပါပြီ။
ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့် ရကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့မဆို ဆပ်နိုင်ကြပါစေ…။
ကြွေဟောင်းဆပ်ခွင့် ရဖို့ မျှော်လင့်တောင့်တသူ အားလုံးလည်း ဆပ်ခွင့် ရနိုင်ကြပါစေလို့…။
လူတိုင်းနီးပါးဟာ ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့် မရနိုင်ကြပေမဲ့.. ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့် မကြုံနိုင်ပေမဲ့.. ကြွေးဟောင်းဆပ်ဖို့ မေ့လျော့နေပေမဲ့...
ကြွေးသစ်ပေးဖို့.. ကြွေးသစ်ချနိုင်ဖို့တော့ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြတဲ့ အလုပ်တခုပါပဲ..။(ဒါကလည်း အများအားဖြင့် သားသမီးအပေါ် မှာဆိုရင် ပိုမှန်ကန်ပါတယ်)
ကြွေးသစ်ဆိုတာ မိမိရဲ့ သားသမီး အပေါ် ချမဲ့ ကြွေးသစ်လား.. အလှူဒါနနဲ့ ပက်သက်ပြီး ချမဲ့ ကြွေးသစ်လား.. မိမိရဲ့ ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ အပေါ် ချမဲ့ ကြွေးသစ်လား.. အကူအညီ လိုအပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အပေါ် ချမဲ့ ကြွေးသစ်လား.. ဒုက္ခရောက်သူ အပေါ်ကို ချမဲ့ ကြွေးသစ်လား..
ငွေအင်အား၊ လူတယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရားကို အခြေခံလို့ စိတ်ဓါတ် ခွန်အားနဲ့ ဘယ်အရာ. ဘယ်အလုပ်. ဘယ်နေရာ. ဘယ်အခြေအနေမျိုး. မှာမဆို ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ထက်ထက်သန်သန် နဲ့ ကူညီနိုင်တာလည်း ကြွေးသစ် ချခြင်း တမျိုးပဲ မဟုတ်ပါလား..။
မိမိကိုယ်တိုင် မမြင်မိပေမဲ့ မိမိရဲ့ လုပ်ရပ် တခုဟာ သူတပါးရဲ့ လိုအပ်မှု တခုကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက် ရတာကိုက ကြွေးသစ်ချတာပဲလေ…။
မိမိ ကိုယ်တိုင်ရော ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့် ရပြီး ကြွေးသစ် ချဖို့ မေတ္တာတွေ.၊ စိတ်ဓါတ် ခွန်အားတွေ ဘယ်လောက်များ ရရှိထားပြီလဲ... ရလာတဲ့ မေတ္တာ ခွန်အားကိုလည်း လက်တွေ့အသုံးချလို့ ရနေပါပြီလား....
ကြွေးဟောင်းကိုပဲ ရိတ်သိမ်းကြပြီး ကြွေးသစ် မျိုးစေ့မချ နိုင်သူတွေ အတွက် မျိုးစေ့ကျဲဖို့ တိုက်တွန်း ဆန္ဒပြုရင်း…
(ယနေ့ ကဆုန်လပြည့် `ဗုဒ္ဓနေ့´ အတွက် ရည်စူးပြီး ရင်ထဲ တနေရာမှာ ခိုအောင်းသွားနိုင်ဖို့ အတွက် မျှော်လင့်ရင်း..)
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:46 PM 16 comments:
ကြာနေပြီဖြစ်သော ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ ဗူးလေးတဗူးကို ဘီဒိုထဲကနေ အမှတ်မထင် ထုတ်ကြည့်လိုက်မိတယ်။
ဒီဗူးလေးကို မထုတ်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်တောင် ကျော်လာခဲ့ပေါ့…
အဟောင်းကို အသစ်မဖြစ်ချင်တာရယ်၊ အတိတ်ကို မေ့ပစ်လိုက်ချင်တာရယ် ကြောင့် ဗီဒိုအံဆွဲ တနေရာမှာ ခိုလှုံခွင့်ပေးထားခဲ့တာ…
ဗူးလေးထဲမှာတော့ မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်လေး တအုပ်၊ ပုလဲလက်ကောက်လေးတရံ၊ ရေသံပုတီးလေးတကုံးနဲ့ မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပေါ့………
အရာရာကို အသစ်ကနေ ပြန်စလို့ ရမယ်ဆိုရင် ပြန်စချင်ပါတယ်လို့ ဆိုရင် မှားများသွားပြီလား….
မသေချာ မရေရာတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ရှင်သန်နေရတာထက် စာရင် ပြတ်ပြတ်သားသား ဘ၀တခုကို လက်တွေ့တည်ဆောက် လိုက်တာက အကောင်းဆုံးပဲ မဟုတ်လား…။ အဲဒီ မသေချာတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကြောင့်ပဲ ရယူ ပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်တွေ အားကြီးလာရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နာကျင်မှုတွေသာ တိုးလာပါရဲ့.။
တကယ်တော့လည်း ကိုခန့်ရယ်… မင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေ ဆိတ်သုဉ်း ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်ကျော် ကြာခဲ့ကြပေါ့..
ဲဒီ ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ မျှော်လင့်ချက် တွေထဲမှာလည်း နေသားတကျ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့တာကိုး……
အဲဒီနေ့က မိုးတွေရွာမနေခဲ့သလို နှင်းတွေလည်း ကျမနေခဲ့ပါဘူးလေ….
တို့ထိုင်နေကျ (ကန်တင်း)ဆိုင်လေးထဲကို မင်းဝင်လာခဲ့တယ်လေ.၊ တို့ဘေးနားက ၀ိုင်းမှာ ထိုင်ပြီး တို့ကို ကြည့်နေခဲ့တာကို နောက်ကျမှ သိခဲ့ရတယ်။ ရှင်းသန့်နေတဲ့ မင်းရဲ့မျက်နှာနဲ့ အလိုက် ကတ္တီပါ ဖိနပ်စီးတတ်တဲ့ မင်းကို တို့နောက်ကျမှ မှတ်မိခဲ့တယ်။ နောက်မှ သိလိုက်ရတာက တို့ထက် အတန်း တနှစ်ကြီးပြီး တို့နဲ့မေဂျာတူတယ် ဆိုတာပါပဲ။ နေ့တိုင်း တို့ထိုင်နေကျ နေရာလေးကို အမြဲ လာထိုင်တတ်ပြီး တို့သူငယ်ချင်းတွေက တဆင့် တို့ကို ခင်ခွင့်တောင်းခဲ့တာ၊ တို့နဲ့ ရင်းနှီးခွင့် တောင်းခဲ့တာကို… အဲဒီထဲကသာ ခင်မင်ခွင့် မပေးဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့…
ဒီလိုနဲ့ပဲ နေ့စဉ် တွေ့မြင်နေကြ ကန်တင်းလေးထဲမှာ…. စာသင်ခန်းရှေ့မှာ…. တို့ကို ကြံဖန် စကားလာပြောတတ်တဲ့ မင်းကို တို့ကလည်း အားနာနာနဲ့ စကားပြန်ပြောမိသလို မထင်မှတ်ပဲ ခင်မင်မိကြတယ်လေ။ တို့သူငယ်ချင်းတွေထဲက တယောက်က မင်းကို ကန်းတင်းထဲက မင်းထိုင်မဲ့ခုံမှာ `ဆေးလိပ်မသောက်ရဘူးနော်… ကျမ်းမာရေးကို ထိခိုက်လိမ့်မယ်´ လို့ စာရွက်လေး ပေါ်မှာ ရေးပြီး ချပေးခဲ့တာကို အမှတ်ရမိတယ်။ ပြီးတော့ အနောက်က လိုက်လာပြီး မင်းက `ဆေးလိပ်မသောက်တော့ဘူးနော်´တဲ့….။ တို့ကတော့ ငေးပြီးတော့သာ ကျန်နေခဲ့မိတယ်..။ မင်းသူငယ်ချင်းတွေကလည်း တို့ကို မင်းနဲ့ သဘောတူလို့….. အမျိုးမျိုး နီးစပ်အောင် အကြောင်းရှာကြတာ တို့သိတာပေါ့..။
ဒါပေမဲ့လည်း တို့သိတာတော့ ဘယ်လောက်ပဲ မေတ္တာရှိနေနေ ကံတရား ဆိုတာကလည်း ရှိသေးတာကလား…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တို့စိတ်ချမ်းသာ ချင်တယ် ကိုခန့်ရေ……..။ စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတွေနဲ့ အတူ တို့ကလည်း သစ္စာရှိစွာနဲ့ ပြန်လို့ တုံ့ပြန်ချင်ပါတယ်..။ တို့ကလည်း လူတယောက်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ မချစ်နိုင်သလို လွယ်လွယ်နဲ့ မေ့မသွားနိုင်တဲ့သူ မို့လို့ပါ…။ တို့ရင်ထဲကို လွယ်လွယ်နဲ့ ၀င်လို့မရသလို ရင်ထဲကနေ လွယ်လွယ်နဲ့ ထုတ်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ သူတယောက်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိနေလို့ပါ…။
တစတစနဲ့ တို့ရင်ထဲ မင်းဝင်လာတာကို သိလာခဲ့တယ်လေ…။
ဒီလိုနဲ့ပဲ မင်းနဲ့ကိုယ် လူသိရှင်ကြား ချစ်သူတွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။ တို့က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မခွဲမခွာ အတူ နေလို့ မင်းမနာလို ဖြစ်ခဲ့တာ… သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သူတို့နဲ့ အတူ မနေရင် စိတ်မကောင်း မနာလို ဖြစ်ခဲ့ကြတာ တို့ကတော့ ကြားထဲကနေ ဘယ်သူ့ကိုမှ မနာလို မဖြစ်ရအောင်.. စိတ်မကောင်း မဖြစ်ရအောင် တို့နေပေးခဲ့ပါတယ်လေ…။ တို့က သူငယ်ချင်းတွေကို ချစ်သလို မင်းကိုလည်း စိတ်မကောင်း မဖြစ်စေချင်တာပါ ကိုခန့်ရယ်…………….
တို့ရဲ့ အားလုံးကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်တဲ့ စိတ်ကို အသိအမှတ် မပြုခဲ့ပါလား....
ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေကြောင့်လည်း ပဋိပက္ခ မဖြစ်ချင်ပါဘူး ကိုခန့်ရယ်…………။ ဒါပေမဲ့လည်း မနာလိုများခဲ့တဲ့သူ… ကိုယ်ကလွဲလို့ တခြားသူနဲ့ ခင်တာကို မလိုချင်တဲ့သူနဲ့ တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ…….၊ စိတ်ရှုပ်ရတာကို လက်မခံချင်တဲ့သူအနေနဲ့ သိပ်ကို ခက်ခဲတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ လုံးပန်းခဲ့ရတယ်ဆိုရင် တို့ဘာဆက်လုပ်သင့်သလဲဟင်…….။
တဘက်က ချစ်သူ…တခြား တဘက်ကလည်း သိပ်ကိုချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ..……
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချစ်သူနဲ့ လွန်ဆွဲပွဲတခုလို့ ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူးလေ….
မင်းနဲ့တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးက အဲဒီထဲက မသေချာ မရေရာခဲ့ပါဘူးလေ..။ ဒါပေမဲ့လည်း တို့က ရှေ့ဆက်တိုးပြီးတော့သာ အဆင်ပြေမဲ့ ဆက်ဆံရေး တရပ် ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ တို့ကို မေတ္တာ နှောင်ကြိုးတွေက တုတ်နှောင်ထားခဲ့ ပြီးပြီကိုးးးးးးးး.
ဖြစ်ပြီးရင် ပျက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ထုံးကို နှလုံးမူနိုင်ခဲ့ရင် တို့ရဲ့ အခြေအနေ က ပုံမှန်ထက် ဆိုးမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့.။ တို့နှစ်ယောက် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့မှ မဝေးချင်ပါဘူးလို့ ပြောရင် မင်းယုံမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ တို့သိပါတယ်။ မင်းကလည်း တို့ကို မင်းထက် သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ် ပိုချစ်ခင်တဲ့သူ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တာကိုး။
တခြားသူ အမြင်မှာ တို့သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် ပြောင်းလဲခဲ့တာပါလို့ ပြောတာကို တို့လက်မခံပါဘူး ကိုခန့်ရေ..။ အဓိကက တို့နှစ်ယောက်နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စ တခုဖြစ်နေလို့ပါ။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ဖျက်ဖျက် တို့နှစ်ယောက် မပျက်ဖို့သာ အဓိက မဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့လည်း မာနကြီးတဲ့တို့နဲ့ အလျှော့မပေးတတ်တဲ့ မင်းနဲ့ ဘယ်လိုမှ ပေါင်းစည်းလို့ မရဘူးဆိုတာကို တို့ သိလို့နေပါပြီ။။။ ဒါကြောင့်လည်း မသေချာတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မတုတ်နှောင်ချင်လို့ပါ ကိုခန့်ရေ….။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရင်ထဲ တနေရာမှာ တသက်စာ အတွက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိခဲ့တာပါလို့ ပြောရင် မင်း ရီနေမလား..။ လှောင်ပြောင်တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ တို့ကို ကြည့်နေမလား..။ ရိတိတိနဲ့များ ဘာတွေပြန်ပြောနေမလဲ..။ မယုံကြည်နိုင်ပါဘူးလို့များ ပြောနေမလား..။
ဒါပေမဲ့ အချုပ်အနှောင် ဘ၀က ကင်းလွတ်ခွင့် ရခဲ့တဲ့ အတွက်တော့ မင်းကို တသက်စာ ကျေးဇူးတင်မိ နေမှာပါ…။ တို့က အချုပ်အနှောင် ကင်းပြီး လွတ်လပ်တဲ့ ဘ၀ကို တရှိုက် မက်မက် မက်မောလို့ပါကွယ်…။ ဒါကြောင့်လည်း အချစ်ထက် လွတ်လပ်တဲ့ ရင်းနှီးခင်မင် ပွင့်လင်းမှုကို ပိုပြီး ဦးစားပေးခဲ့တာပေါ့။။။
ဒါကြောင့်လည်း မင်းက ပိုပြီး နာကျည်း သွားခဲ့တယ်မလား….။
မင်းတို့ကို တသက်စာ နာကျည်း လိုက်ပါတော့..။ ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့တော့… ကိုခန့်.............
တို့လည်း အနှောင်အဖွဲ့ က လွတ်ကင်းခွင့် ရသွားခဲ့ပါပြီ.....။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:02 PM 10 comments:
တမ်းတမိသော အမေ့လက်ရာ (၂)…
ဒီနေ့ မနက်စောစောမှာ ကျမအမေ ဖုန်းဆက်တော့ ရခိုင်မုန့်တီ ချက်စားတယ်တဲ့။ သမီးစားချင် နေမယ်မလားတဲ့။ ကြားလိုက်တာနဲ့တင် သားရေယိုပြီး ကျမအမေ့ရဲ့ ချက်နေကြ ရခိုင်မုန့်တီ လက်ရာလေးကို ပြေးပြီး မြင်ယောင် နေမိတယ်။
စိတ်ထဲမှာလည်း သိပ်ကို စားချင်တာပေါ့လို့ ပြောနေမိတယ်။ တကယ်တော့ စားချင်တယ်လို့ ပြောမထွက်ခဲ့ပါဘူး အမေ…။
အစားအသောက် ချေးများလွန်းတဲ့ ကျမ…..!
ချေးများတာထက် မစားတဲ့အရာ များလွန်းတဲ့ ကျမ….!
တော်ရုံချက်တာ စားလို့ မရတဲ့ ကျမ….!
အခုတော့ အစားအသောက်နဲ့ ပက်သက်ရင် ချေးမများနိုင်တော့ပါဘူး။ ဗိုက်ပြည့်အောင် စားတဲ့ သဘော အနေနဲ့ပဲ စားလိုက်တာပါပဲ။ ဒါလည်း အခြေအနေက ကျမကို သင်ပေး လမ်းညွှန် လိုက်တယ်လို့ ထင်တယ်လေ။ ဒီလို အခြေအနေမှာ ဒီလို နေရမှာပဲ ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နေထိုင်တတ်၊ စားသောက်တတ်အောင် သင်ခန်းစာ ရလိုက်ပါတယ်။
အရင်တုန်းကတော့ ကျမအမေ ရခိုင်မုန့်တီ ချက်မယ်ဆိုရင် ကျမက အမေဘေးနားမှာ ၀ိုင်းကူလုပ်ပေး နေကြပေါ့။ ပြီးတော့ ကျမအမေ ချက်တာ ထိုင်ကြည့်နေကြလေ။
ရခိုင်မုန့်တီ ချက်တဲ့အခါ အကောင်းဆုံး ငါးကတော့ (ငါးရွှေ) ငါးပါ။ ငါးရွှေက ညှီတဲ့အတွက် အရင်ဆုံး ငါးကို မီးလေးနဲ့ ကင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ပဒဲကော၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငါးပိ၊ ဂျင်း ထဲ့ပြီး ငါးနဲ့ ပြုတ်ပါတယ်။ ဆားနဲ့ အချိုမှုန့်ကတော့ သင့်သလောက် ထဲ့ပါတယ်။ ငါးကလတ်ပြီး ချိုနေရင် အချိုမှုန့်တောင် သိပ်ပြီး ထဲ့စရာမလိုပါဘူး။ ပြီးမှ ပြုတ်ထားတဲ့ ငါးကို အရိုးနွှင်ပြီး ဒယ်အိုးထဲ ဆီထဲ့ပြီး နနွင်းမှုန့် နဲနဲနဲ့ ခြောက်သွားအောင် ကြော်ပါတယ်။ အဲဒါကို (ငါးမုန့်)လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျမအမေကတော့ ဟင်းရည်အိုးထဲကိုလည်း ပြုတ်ပြီးသား ငါးကို နွှင်ပြီး ထဲ့ပါသေးတယ်။ ကြော်ထားတဲ့ ငါးမုန့်ကတော့ စားတော့မှ ဟင်းပန်းကန်ထဲ ထဲ့စားကြတာပါ။ စားတော့မယ်ဆိုမှ မုန့်ဖတ်၊ ဟင်းရည်၊ ငါးမုန့်၊ နံနံပင်၊ အချဉ်အဖြစ်တော့ မန်းကျည်ရည် (ဒါမှမဟုတ် မန်းကျည်းသီးစိမ်းရရင်တော့ မန်းကျည်းသီးစိမ်းကို ရေနွေးလေးနဲ့ ဖျော်ထားပေါ့)၊ ငရုပ်သီး အဖြစ်တော့ (ငရုပ်သီး အစိမ်းမှုန့်ကို ဆီနဲ့ ကြော်ထားတာ)၊ တချို့ကတော့ ငရုပ်သီး အစိမ်းတောင့်ကို ထောင်းပြီး ရေနဲ့ဖျော်ထားတာ ကို ထဲ့ကြပါတယ်။
အားလုံး စုံစုံလင်လင် ထဲ့ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ ပူပူစပ်စပ်လေး ရခိုင်မုန့်တီ စားလို့ ရပြီပေါ့။
ကျမ သိပ်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အစားအသောက်လေးပါ။ ကျမကြိုက်တဲ့ အမေ့ ဟင်းလက်ရာတွေထဲက တခုဖြစ်တဲ့ ရခိုင်မုန့်တီကို တမ်းတရင်းနဲ့…..။
တချို့ တချို့သော အရာတွေက ဝေးကွာသွားတော့မှ တန်ဖိုး ရှိမှန်း ပိုသိလာကြတယ်။ နီးနီးလေး တုန်းကတော့ တန်ဖိုးရှိမှန်း မသိကြဘူးလေ။ နီးနေတဲ့ အတွက်လည်း တန်ဖိုး ရှိမှန်း သိနေပေမဲ့ မပြောဖြစ် ခဲ့ကြတာတွေ ရှိတတ်ကြပြန်တယ်။ ဝေးသွားတော့မှ မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေ ကို ပြန်ပြီး မပြောဖြစ်ခဲ့ရကောင်းလားလို့ အားမလို အားမရ ဖြစ်ကြပြန်တယ်။
ဒါပေမဲ့ တချို့ မပြောဖြစ်ခဲ့တာတွေက နောက်ကျသွားမှန်း အချိန်လွန်မှ သိကြရတယ်။ ဒါကြောင့် နီးနေတုန်းမှာ တန်ဖိုးရှိကြောင်း၊ အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ပြောဆို ဖြစ်ခဲ့ ကြရင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် နီးနေတုန်းမှာ အကောင်းဆုံး စကားလုံးလေးတွေနဲ့ တန်ဖိုးရှိမဲ့ စကားတွေကို ပြောဆို ကြမယ်ဆို စိတ်ချမ်းမြေ့ စရာကောင်းတဲ့ အချိန်လေးတွေကို ကြုံတွေ့နိုင်ကြမှာပါ။ တချို့ကျတော့လည်း ပါးစပ်က ပြောတာထက် ရင်ထဲ၊ စိတ်ထဲကနေ အသိအမှတ်ပြု ကြတယ်။ အကောင်းဆုံး ကတော့ စကားလုံးလေးတွေနဲ့ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးထားတတ်မှု နဲ့ စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အတိုင်း ပြောဆို နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်းပေါ့.......။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 3:09 PM 12 comments:
လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ မျက်နှာဖုံး ကိုယ်စီ ရှိကြပြီး အဲဒီ မျက်နှာဖုံး ကိုယ်စီနဲ့ပဲ ကခုန်နေကြ ရတာပါ။ မျက်နှာဖုံး ကလည်း အမျိုးမျိုး ရှိကြလေတော့…… လူတဦးနဲ့ တဦးရဲ့ မျက်နှာဖုံး တွေလည်း တူနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။
တချို့က မင်းသား မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က လူကြမ်း မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က အပြုံး မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က လူချမ်းသာ မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က လူဆင်းရဲ မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က ဘီလူး မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က ဟန်ဆောင် မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က အရူး မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က အာဏာရ မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က ပညာတတ် မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က ပညာမဲ့ မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က ရိုးသားတဲ့ မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က လိမ်ညာတဲ့ မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က အထင်ကြီးနေတဲ့ မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က အားငယ်တဲ့ မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က မျက်ရည်တွေ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ မျက်နှာဖုံး၊ တချို့က ဒေါသတွေနဲ့ မျက်နှာဖုံး………။
များလွန်းလှတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေထဲမှာ ကိုယ်လည်း ဘယ်လို မျက်နှာဖုံးနဲ့ ပါလိမ့်……။
တချို့ကလည်း နေရာ ဒေသ ကိုလိုက်ပြီး မျက်နှာဖုံး အမျိုးမျိုးကို တပ်လို့ ကခုန်နေကြတယ်။ တချို့ကလည်း နေရာ ဒေသ ပြောင်းသွားပေမဲ့ မျက်နှာဖုံး တမျိုးထဲကိုပဲ တပ်ပြီး ကကွက်မျိုးစုံနဲ့ ကကြပြန်တယ်။ တချို့ကလည်း အချိန်ကာလ ကိုလိုက်ပြီး မျက်နှာဖုံး ပြောင်းသွားကြတယ်..။ ဘယ်လိုပဲ မျက်နှာဖုံး ပြောင်းလဲ သွားပါစေ…. အရေးကြီးတာကတော့ မိမိရဲ့ စိတ်နဲ့ တထပ်တည်း ကျနိုင်တဲ့ မျက်နှာဖုံး ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ မိမိရဲ့ စိတ်မပါပဲ သူတပါးရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူတပါးရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြောက်စိတ်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ငွေအင်အားရဲ့ မလွန်ဆန်နိုင်မှုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အတ္တကို ရှေ့တန်းတင်တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်… ဟန်ဆောင် မျက်နှာဖုံး ကိုတပ်ရင် မလှမပနဲ့ အကျည်းတန် မျက်နှာဖုံး ဖြစ်သွားမှာပါ။
မိမိရဲ့ စိတ်နဲ့ ညီမျှနိုင်မဲ့ မျက်နှာဖုံးကို ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်လို့ လှပသေချာ သပ်ရပ်တဲ့ မျက်နှာဖုံး တပ်ဖို့ပါပဲလေ။ တပ်နိုင်ဖို့ စိတ်လည်း ရှိရမှာပါ။ သူတပါး တပ်ခိုင်းတဲ့ မျက်နှာဖုံး ကို မတပ်ဖို့တော့ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ရှိရမယ်…။
မိမိ ကိုယ်ပိုင် မျက်နှာဖုံး ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ တပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်.။
နေရာ ဒေသ ကိုလိုက်ပြီး မျက်နှာဖုံး ပြောင်းတပ်မယ် ဆိုရင်လည်း မိမိ ကိုယ်တိုင် လှပတဲ့ မျက်နှာဖုံး ဖြစ်ဖို့ကို သေချာ ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အများရဲ့ ရှုံ့ချ ကဲ့ရဲ့မှုက လွတ်မှသာ သန့်ရှင်း စင်ကြယ်တဲ့ မျက်နှာဖုံးနဲ့ လူအဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်နိုင်ပြီး လှပတဲ့ မျက်နှာဖုံး လူသား ဖြစ်သွားမှာပါ…။
မြို့မျက်နှာဖုံး ဆိုတာလည်း ရှိသေးတာပဲလေ။ မြို့ရဲ့ လူချမ်းသာ အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး…၊ ဘာဖြစ်လို့များ မြို့မျက်နှာဖုံး လို့ ခေါ်ကြတာလဲ…၊ ဓန အင်အား ချမ်းသာတာ ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်မယ်၊ အာဏာ ရှိတာ ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်မယ်၊ လူချစ်လူခင် များပြီး အများအကျိုး ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်တာ ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်မယ်၊ ဓန အင်အားလည်း ချမ်းသာပြီး အများအကျိုး ကူညီပေးနိုင်လို့ ကိုယ်ချင်းစာတရား ရှိတဲ့သူ တယောက် ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်မယ်၊ စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်းရှိတဲ့ သူတယောက် ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်မယ်………..။
မြို့မျက်နှာဖုံး ဆိုပေမဲ့လည်း လူထုအများရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တဲ့ သူလား…. ဒါမှမဟုတ် အများရဲ့ ရွံရှာ မုန်းတီးမှုကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ သူလား…….။ အများက မလွှဲသာ မရှောင်သာ ချစ်ခင်ချင်ယောင် ဆောင် နေကြရတဲ့ သူလား……။
တချို့ကလည်း အသိအမြင်တွေ ရပြီး ဟန်ဆောင် မျက်နှာဖုံး တွေကို ခွါချလို့ မိမိနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မျက်နှာဖုံးကို တပ်ပြီး ပျော်မြူးလို့………!
တချို့ကလည်း အသက်အရွယ် ကြီးလာပေမဲ့ ဟန်ဆောင် မျက်နှာဖုံးတွေ၊ တန်ဖိုးမရှိတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေကို တပ်လို့ မိမိရဲ့ အတ္တ ထဲမှာ နောင်တမရ ပျော်မြူး နှစ်ခြိုက် နေဆဲပဲ…….!
တချို့ကလည်း အသက်အရွယ် ငယ်ပေမဲ့ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် မျက်နှာဖုံးနဲ့ မိမိရဲ့ စိတ်နဲ့ထပ်တူကျတဲ့ အများအတွက် တန်ဖိုး ရှိနိုင်မဲ့ မျက်နှာဖုံး တွေ တပ်ပြီး ဘ၀ရဲ့ ကြီးမြတ်မှုကို ခံယူနေလို့………..!
တချို့ကလည်း ပညာတတ်ပေမဲ့ သူတပါးရဲ့ ထိန်းချုပ်မှု အောက်က မလွတ်မြောက်နိုင်ပဲ တပါးသူရဲ့ မျက်နှာဖုံးနဲ့ ကပြ အသုံးတော် ခံလို့………..!
တချို့ကလည်း အခြေအနေ တခုကြောင့် အတတ်ပညာ မရှိပေမဲ့ အသိပညာ ကြွယ်ဝပြီး လူသားတွေ အတွက် အကျိုး ရှိမဲ့ မျက်နှာဖုံး ကိုတပ်လို့ ကြည်နူး ရွှင်လန်း နှစ်ခြိုက်ပြီး လောက လမ်းကြောင်းကြီးပေါ်မှာ အကျိုးရှိရှိ လျှောက်လှမ်းလို့...........!
လူသား အားလုံးလည်း ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ လှပ သပ်ရပ် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်တဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေ နဲ့သာ အလှဆင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း......။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:18 PM 16 comments:
မနေ့က မနက်ထဲက ကျမတို့ရုံးမှာ ဧပရယ်ဖူးနေ့ ကိုသတိထားဖို့ ပြောဆိုနေကြတယ်..။ ကျမကလည်း သတိထားရမယ် ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာတော့ တွေးမိလိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ သတိမထားမိပဲ မေ့သွားတာပါပဲ။
နေ့လည်မှာတော့ ညီမ တယောက်က လှမ်းပြီး `လူတယောက်´ သေသွားပြီ ဆိုပြီး လှမ်းပြောပါတယ်။ အဲဒီလူက ကျမတို့ မေတ္တာထားတဲ့ လူတယောက်ပေါ့။ အဲဒီထိတော့ ကျမဧပြီဖူးနေ့ကို မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေတုန်းပါပဲ။ ကျမက အဲဒီ ညီမလေးကို ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ လာမနောက်ပါနဲ့လို့..။ လူတွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒုက္ခပေးဖို့၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒုက္ခပေးဖို့ အတွက် အသက်ရှင်နေအုံးမှာပါလို့။ လူအများကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ သူတွေဟာ အသက်ရှည်ကြတာ များတာကို တွေ့ကြရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့များပါလိမ့် လို့လည်း ကျမ အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်။ ခံရတဲ့သူတွေလည်း ၀ဋ်ရှိသမျှတော့ ခံရအုံးမှာပေါ့လို့ စိတ်ပြေရာ ပြေကြောင်း တွေးနေမိတယ်။
ညဘက်မှာတော့ ကျမစိတ်ထဲမှာ ဧပရယ်ဖူးနေ့ကို မေ့သွားပါပြီ။ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် တယောက်က ဖုန်းဆက်ပြီး ရုံးမှာ ပစ္စည်းတခု ကျန်နေခဲ့တာ သိလားတဲ့။ ကျမလည်း စိတ်ထဲမှာ ဘာပစ္စည်းများ ကျန်နေခဲ့တာ ပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားနေမိတယ်။ ဘာကျန်ခဲ့တာလည်း ဆိုတော့ တွေ့ရင်သိမှာပေါ့တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကျမလည်း မနက်မှပဲ ကြည့်တော့မယ်ဆိုပြီး အိပ်လိုက်ပါတယ်။ မနက် ရုံးရောက်တဲ့ အထိလည်း ကျမမှာ ရှာလိုက်ရတာ…။ ဘာပစ္စည်းကျန်နေခဲ့ ပါလိမ့် ဆိုပြီးတော့..။ ဘာမှလည်း မတွေ့ပဲနဲ့ ကွန်ပြူတာ စားပွဲပေါ်မှာ အလုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းကလွဲလို့ ဘာမှလည်း မတွေ့မိဘူး။ ကျမနဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ညီမလေး ရောက်တော့မှပဲ ရှင်းသွားတော့တယ်လေ..။ ဧပြီဖူးနေ့လေတဲ့….။ အဲဒီတော့မှ သြော်…….. မေ့သွားတဲ့အချိန်မှာ…… ဧပရယ်ဖူး အတွက် နောက်တာပါလားဆိုပြီးတော့..။ မေ့လည်း မေ့တဲ့ ကျမပါပဲလေ…။
တခါတရံ ကျမတို့တွေဟာ မေ့သွားတဲ့ အချိန်မှာ သတိထားနေတဲ့ ကိစ္စလေးတွေကိုပဲ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်သွားတတ်ကြပါလားလို့.။
ဧပရယ်ဖူးနေ့မှာ မေ့သွားတဲ့ အခိုက်အတံ့လေးမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အခြေအနေလေးပါ….။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:41 PM 17 comments: